musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius ine zita rekuti “Lenglet". Yedu Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeinozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Clement Lenglet Yehucheche Nhau- Iyo Ongororo Kusvitsa. Kiredhiti FC Barcelona uye alchetron
Ongororo yacho inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, kumashure kwemhuri, dzidzo / basa rekuvaka, kutanga kwehupenyu hwebasa, nzira kune mukurumbira nyaya, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwepamoyo, mararamiro uye hupenyu hwemhuri nezvimwe.
Ehe, munhu wese anoziva kuti anotarisira kwenguva refu kuFC Barcelona, ​​mutambi anopfuura kugona kubata varwiri vemuviri. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveClement Lenglet's biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, mazita ake akazara ndiClement Nicolas Laurent Lenglet. Clement akaberekwa pazuva re17th raJune 1995 kuna baba vake Sébastien naamai vane zita risingazivikanwe muguta reBeauvais, France.
Mhuri yaClement Lenglet ndeBeauvaisiens uye vane kwavakabva Beauvais. Iri iguta kuchamhembe kweFrance iro rinowanikwa anenge 75 makiromita kubva kuParis. Beauvais ndiyo imba yekuBeauvais Cathedral, imwe yemakereke akanaka kwazvo epachechi neGothic architidziro (chimiro chakazomera muEurope panguva yeKumusoro neKupera Kwemakore Ekupedzisira).
Clement Lenglet Mhuri Dzinobva- Iye anokudzwa kubva Beauvais, guta rinozivikanwa neayo katsi. Chikwereti kuRailEurope
Clement Lenglet akarererwa mumhuri yepakati yemhuri yepakati yechiKristu. Iye aive mwana wekutanga pakati pe3 dzimwe hama (dzinoratidzwa pazasi) akazvarwa kuvabereki vake. Clement akakurira pamwe nevanun'una vake vaviri vepedyo vane kusiyana kwezera hakuna kunyanya kucherechedzwa.
Mudiki Clément Lenglet akafananidzirwa pamwe nehama dzake. Kiredhiti Boursorama
Tichitarisa kubva pamufananidzo, iwe uchaona kuti ivo vatatu vatatu vakazova nemwana mwana anozivikanwa kuva mucheche weimba yeLetlet.
Pakutanga achiri mudiki, baba vake Sebastian Lenglet mhuri yakatora mhuri yake kubva kumusha kwavo kweBeauvais kuti vagare muJouy-sous-Thelle, Commune mudhipatimendi reOise kuchamhembe kweFrance. Yaive kuJouy-sous-Thelle Clement akanhonga kufarira mubhola.
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kubva achiri mudiki, Clement aive nechinangwa chekuve nyanzvi yebhola. Ainge akasiyana nevamwe vana mukati Jouy-sous-Thelle uyo zvakare aive nechishuwo chakafanana. Chakamusiyanisa ndechekuti akaona izvo kushuva sekutanga kwekurwa. Panzvimbo pekuenda kunoona shamwari dzake kana kunamatira nePS (PlayStation), Lenglet aigona kusarudza kuve mubindu nababa vake nababamunini. Ivo vaive vekutanga kudzidzisa vake.
Kuve neaimbova mutambi wenhabvu kuna baba, zvaive nyore kuti Clement Lenglet awane rutsigiro rwese runodiwa pakuisa hwaro hwebasa. Kure kubva kumhuri yake yebhora yebhora, Clement Lenglet aive nemakore mana panguva iyoyo akatanga kukwikwidza aine vana makore manomwe. Akapihwa iyo nhamba 10 shati nekuti aive ane hunyanzvi kupfuura vamwe kunyangwe aive mudiki.
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Rimwe gore gare gare paakanga ave nezera 5, Lenglet akatanga kuenda kumiedzo kumabhizimusi ebhola epedyo. Akabudirira kukunda miedzo neMontchevreuil FC, imwe kirabhu diki inowanikwa mudiki yeFrance yeOise iri padyo nemhuri yake. Kuswederana pedyo ndiko kwaive chikonzero nei vabereki vake vakamutendera kujoina kirabhu.
Clement akaziva chaaida kubva chaipo kubva paakapinda paMontchevreuil sezvakaratidzwa neimwe yeshamwari dzake dzehudiki, Matthieu Qesmel uyo wavakatamba pamwechete pakirabhu (2001-2007). Aive pakati pevamwe vana vakapihwa hunhu hwenhabvu hwakakodzera kuti vatange basa ravo rerwendo.
Clement Lenglet Pakutanga neBhola rake Rekunak- Pano, anofunga nevamwe vake vadiki vechidiki. Chikwereti kuna IG
Kutsunga kwaClement Lenglet kuti abudirire kwakamuona achijoinha imwe kirabhu inonzi Chantilly. Icho chikoro chakawana mukurumbira wekudzidzira uye kuziva matarenda madiki muFrance. Pakubatana, Lenglet akacherechedza kirabhu kuti ive Kevin Gamero mune nyeredzi akapedza kudzidza mune yavo nhoroondo mabhuku.
Murairidzi wechidiki weL Lenglet muChantilly, Sylvain Dorard akamutendeudzira kuruboshwe kuruboshwe paakasvika kuchirabhu. Makore maviri gare gare, akatendeuka, panguva ino kuva mutungamiriri wedziviriro. Clement Lenglet akatanga kutevera mumakwara a Kevin Gameiro. Akabatsira timu yake pakutanga mukukunda mukombe wake wekutanga.
Clement Lenglet akafananidzirwa padivi pomutambi wake wetsiva uye nekupfura mutambo. Chikwereti kuna IG
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Kubva mushure mekutangisa kwake kwekutanga, Clement Lenglet akatanga kufunga nezvekuita kuti shungu yake kuve rake basa. Mushure mekuwedzera trophy yake yekutanga muCV yake, akatanga kuve neyekutenda kuti aizoigadzira. Baba vaLetlet havana kusiiwa kunze muchipiriso chekuve nechokwadi chekuti mwanakomana wavo basa rinoramba rakabudirira. Clement akambotaura nezve kubatanidzwa kwababa vake pabasa rake;
"Baba vangu dzimwe nguva vanogona kuita 3 kufamba vodzoka vhiki pakati peChantilly nemhuri yangu kumba kuti vandiise kudzidziswa, pamwe nemitambo yevhiki."
Clement aiziva kuti kuti abudirire, zvaive zvakafanira kuti ave nehunyanzvi hwekuita zvemitambo mumitambo yake ichiteverwa nerombo rakanaka. Iye zvakare aiziva kuti aida mukana wevanyoreri kubva kumakirabhu akakura uye zvakanyanya kukosha, kwete kukuvara. Ndiwo aive mazwi ake ekutarisira aibhadhara.
KuChantilly, kwakauya zvirokwazvo vateveri parutivi vakatarisa kune vatambi vakanakisa uye Lenglet aive pakati peavo vakatariswa. Pazera re15, akange atoonekwa nevano scout kubva kuna Nancy, kirabhu ine timu yake yepamusoro yakatamba muFrench Ligue 1. Clement Lenglet akabudirira kuwanikwa nekirabhu.
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Lenglet akatanga kutamba nhabvu yepamusoro naNancy sepaya panguva iyo kirabhu yakanga yakanamatira muLigue 2. Waizviziva here? Akakura kuburikidza neyevakuru kirabhu yepamusoro, achiva kaputeni mukuita uku. Semutungamiri, akabatsira kirabhu mukukunda iyo Ligue 2 trophy.
Clement Lenglet akambobatsira vamwe vake vechikwata kukunda Ligue 2. Chikwereti kuEstrepublicain uye Youtube
Kutungamira kirabhu yake kuhwina rake rekutanga rebasa remutambo wepamusoro akaona Lenglet achitora chinyorwa chekuva mutambi wechidiki kupfuura vese akambove muLigi 2 Best XI Izvo zvakamuitawo kuti atumidzirwe nemakambani makuru eEuropean pakati pavo iyo yaive Sevilla.
Pa 4 Ndira 2017, Lenglet akatamira kuSevilla FC kwaakaramba achipenya. Waizviziva here? Aive chikamu chechikamu cheSevilla icho chakachengeta pepa rakachena mukukunda kwavo kuMan United mu 2017-2018 Champions League kutenderera kwe16 gumbo rekutanga. Clement Lenglet akabatsirwawo Seville's Europa League zita rekumanikidza mu2017.
Waizviziva here? Kuita kwaLetlet kwakaita kuti ESPN FC ikamuise muChikwata chavo cheChinese Yakanakisa XI yemwaka we2017 / 2018. Iri feat rakabatawo ziso reFC Barcelona iyo yakamuverengera seimwe yezvakatangira muhwindo ravo rekutamisa zhizha re2018
Clement Lenglet akazova mutambi wechi22nd French munhoroondo yekupfeka mavara eBharça. Kukuvara kwaVermaelen uye Umtiti yakapa Lenglet mukana wekuisa chikumbiro kuna Barca central defense chinzvimbo kumashure Gerard Pique. Senge panguva yekunyora, anoonekwa seyetarisiro refu muFC Barcelona neFrance nhabvu. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Kumashure kweiye akabudirira nhabvu, pane musikana akanaka muEellese akanaka. Vazhinji vateveri venhabvu vanoziva nezvekuti kupindira kwekupfimbana kuri kuwedzera pakati pevakomana vatema kudanana nevachena vasikana. Iyo reverse Zvisinei, ndiyo nyaya iri pakati peEseelle naClement.
Sangana neEstelle- Clement Lenglets Musikana. Chikwereti kuFC-Barcelona-Internationalcules
Iyo nyaya yerudo yeWelllet naEstelle imwe inopunyuka kuongororwa kweziso revanhu nekuda kwekuti hupenyu hwavo hwehukama hauna mutambo. Vese vadikani vanofarira a hukama hwakasimba hwakavakirwa pakasimba tsoka uye chete paushamwari pamwe nerudo rweumwe neumwe.
Clement Lenglets Musikana webasa- Estelle
Tichifunga nezvemufananidzo wepamoyo uri pamusoro, iwe unobvumirana nesu kuti mutambi akanaka saClement anofanirwa nehure rakanaka. Nenzira iyo hukama hwavo huri kuenda, zvine chokwadi chekuti muchato unogona kunge uri wedanho rinotevera kushiri mbiri dzerudo.
Clement nemusikana wake Musikana Estelle vari kudanana zvakanyanya. Chikwereti kune mesqueunclubgr
Thanks kune dzinza, Clement nemusikana wake mune ramangwana vaizoramba vari mumwe wevakaroora akasimbiswa kuFC Barcelona uye timu yenyika reFrance.
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwaiye Clement Lenglet kwaizokubatsira kuwana mufananidzo wakazara wake. Kutanga, Lenglet mumwe munhu anotenda kuti haana kuberekwa muhwina kana mukundi asi akakura kuva iye.
Clement anoshanda nesimba asingabudi kunze uye anoita zvakasiyana chaizvo nevari kutamba navo. Eric Abidal, mukuru wezvemitambo weBarcelona panguva yekunyora akamboreurura kuti haawanzoona maitiro akadaro kubva kune vamwe vatambi. Kutamba nhabvu ndizvo zvinopfupisa hupenyu hwake. Zvakanakisa, Clement munhu anofunga, anodya uye akarara nhabvu.
Zvekare pazivo yemunhu, Lenglet anofarira kuzviremedza mazuva ese uye anochenjera nezvehutsanana hwake nezvezvaanodya, anodaro baba vake, Sebastien. Clement anofarira kudya kumba uye haamboendi kunzvimbo yekudyira yekukurumidza.
Clement Lenglet- Akasarudzika kwazvo mukudya kwake.
Chekupedzisira, Clement mumwe munhu asingaone FC Barcelona seyakanyanya kukwirira pabasa rake. Pane kudaro, anoona kirabhu semukana wekuita chimwe chinhu chakatokura.
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Mhuri yaClement Lenglet varipo kukohwa izvo zvakanaka zvekuisa iwo maitiro akaoma kuvavo pachavo. Nepo vanun'una vake vanowanzouya kushanya uye dzimwe nguva vanogara naye kumaodzanyemba-kumadokero kweBarcelona, ​​vabereki vaLetlet vakasara zvakanyanya muJouy-sous-Thelle, France.
Zvinogona kuve zvakaoma kune vatambi venhabvu kubata nekuenda pamudyandigere - asi baba vaLetlet, Sebastein ari pakati pevaya vakawana mukana wekuenderera mberi nekurarama kwake kurota kuburikidza nemwanakomana wake. Nepo baba vake vakaratidza kutsigirwa zvakanyanya kuburikidza nebasa ravo, mai vaLetlet vanogara hupenyu hwakadzikama-hwakakosha.
Kutenda nekubudirira kwaClement, zvinoita sekutiMhuri yedu yese iri pamusoro pegore, ”Anosetsa Nathan Lenglet- mumwe wevanun'una vake. Pasina kupokana, Clement ave muenzaniso wevakoma vake.
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - LifeStyle Facts
Kufunga pakati pekushanda uye kunakidzwa hakutombove sarudzo yakaoma yeClement Lenglet. Kunyangwe kuita mari chiri chinhu chakashata zvakaipa, asi Lenglet haazotyi kushandisa yakawanda yacho achitenda nekugona kwavo kuchengetedza mari yavo muchiongorora uye yakarongeka.
Kwete kuratidza motokari dzinopenga, dzimba huru uye zvipfeko zvekunze zvechokwadi chiratidzo chekuti chikamu chemari chehupenyu hwake chiri kudzora.
Clement Lenglet LifeStyle Chokwadi. Chikwereti kuna IG
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
CHITENDERO: Zvinoita kunge Clement Lenglet muKristu nekutenda. Zita rake repakati Nicolas rinoratidza kuti anogona kunge achibva kumhuri yeKatorike angangonamata paBeauvais Cathedral.
IZVI ZVAKAITIKA GORE AAKABEREKWA: Mwaka (1995) paakazvarwa akaona eBay achizorarama uye American epic hondo bhaisikopo "Vakashinga Mwoyo" kusunungurwa. Raive zvakare iro iro gore reIndia rakatumidza zita reguta reBombay kuenda kuMumbai.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Clement urefu hweMwana Nyaya uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts